Operating System Windows 10: Indlela ukufunda inhlangano version
Lapho ufaka noma iyiphi uhlelo lwe-Windows e zayo ezihlukahlukene ezahlukene kanye izibuyekezo, ngezinye izikhathi kubalulekile ukuqaphela ukuthi uhlobo inhlangano ikhona kukhompyutha. Kwezinye izimo, lolu lwazi ekuqaleni ukuhlinzeka software inkinga ukuhambisana. Kodwa gxila Windows 10. Ngingasitholaphi version nokwakha uhlelo manje futhi uyoboniswa.
Iyini inhlangano kanye namasistimu okusebenza?
Noma imuphi umsebenzisi we ngcondvomshini kwi kumele Windows-based baqonde ngokucacile umehluko phakathi version of the OS inhlangano yayo. In ulwazi nokuthi ngolunye kuningi abafana ngakho, kodwa inguqulo kujamisela samanje uhlobo uhlelo, eziqala-Windows 3.1, futhi amaphuzu emhlanganweni ukuze ukufakwa iphakethe, okungase noma ngeke ukwazi ukufaka ezinye izingxenye ezengeziwe.
Ngokwesibonelo, e-inguqulo eyisisekelo yiluphi uhlelo azikho izibuyekezo, nakuba ezisekelweni like .NET Framework noma ukusekelwa zokubhala esekelwe Java noma Livamile Visual ekhona. Enye into ukuthi lena akuyona yakamuva amamojuli software, okuyinto ke kufanele zibuyekezwe. Lokhu ngokulinganayo kusebenza ethandwa iphakethe-Microsoft Office.
Windows 10: Indlela ukufunda indlela elula of inhlangano?
Ngokuphathelene ulwazi mayelana nazo zonke ubukeka elula ngokwanele efakwe isofthiwe imvelo. Bheka esibonakalayo Windows 10. Ngazi kanjani inhlangano? Kulula kabi!
Udinga nje ushayele imenyu yengqikithi uma kwesokudla uchofoze isithonjana ikhompyutha, ngokuvamile esisogwini "ideskithophu". Khona-ke, ukukhetha izakhiwo emgqeni emva ucingo ezizoboniswa ulwazi oluyisisekelo kudivayisi, okufaka ulwazi yesistimu yokusebenza. Maye, lena Imininingwane mfushane.
Ukuze uthole ulwazi esiphezulu futhi ukuthola impendulo yombuzo kanjani ukuthola Yakha Windows 10 kukhompyutha yakho, kungcono ukusebenzisa ezifihliwe system imithombo ekuchithweni kwayo.
Esikhathini ejwayelekile "Control Panel," khetha isigaba ezifanele. Ngo incazelo, ngasendleleni, lizoboniswa hhayi kuphela izilungiselelo zamanje we-Windows, kodwa ngokuphelele futhi uboniswa wonke amadivaysi efakwe kukhompyutha esibulalayo wendawo naku laptop yakho, kuhlanganise ngisho nguqulo okukhipha uhlelo okokufaka / BIOS.
Wazi kanjani Yakha Windows 10 kusuka kumugqa womyalo?
Umyalo umugqa futhi omunye amathuluzi avumela wena ukubuka ulwazi isimiso samanje. Ukuze uqale, kubalulekile ukuba abangele imenyu ngokusebenzisa CMD "Run» (Win R) noma imenyu qhafaza kwesokudla-on inkinobho isiqalo, bese ku samuntu elula ukubhalisa winver.
Uma ufuna ukwazi processor kancane bese isekela izinhlelo kufanele sebenzisa umyalo echo% processor_architecture%.
Nokho, singacabangela umbuzo yesistimu yokusebenza Windows 10. Indlela ukufunda umhlangano noma ukuxazulula inkinga yokuthola lolu lwazi? Kulesi (ngasese) kunjalo ilula ngokwanele. umsebenzisi Ordinary tando suffice, futhi imenyu ejwayelekile, izakhiwo computer. Kodwa Onjiniyela software-Windows-izinhlelo kufanele umbe.
Ngaphezu esakhelwe ohlelweni uqobo, ungase futhi usebenzise amathuluzi amaningana eyengeziwe ekhethekile ukunikeza isethi ephelele izici hhayi kuphela "hardware", kodwa futhi imvelo isofthiwe. Njengomthetho, ulwazi abolekise zokusebenza ezinjalo, aqukethe ulwazi okuningi kunalawo olunikezwa uhlelo uqobo.
Phakathi zonke lezi izicelo, isikhundla evelele elalihlala optimizers hlelo, kodwa ungakwazi ngokuvamile ukuthola lonke ulwazi umsebenzisi usebenzisa amathuluzi anjenge-CPU-Z noma into efana nalokho. Kwaba zingabantu nje edume kakhulu futhi ethandwa phakathi inombolo enkulu yabasebenzisi. Ukunganakwa Nokuxhashazwa labo nezinye wezindaba okhonjiswa akudingekile.
Kuyinto, eqinisweni, konke kuhlobene nombuzo Windows 10. Ngazi kanjani ohlelweni Yakha, ngiyacabanga, kucacile kuwo wonke umuntu. Siyoba yini esebenzisa ukufinyelela lolu lwazi, wonke umuntu uyazinqumela.
Indlela okumele kusebenze "windose 8"? Indlela okumele kusebenze "windose 8" ocingweni?
Smolensk Amathuna Petersburg: ikheli, i-Chapel of Xenia babusiswa (Petersburg) kanye nomlando. Kanjani ukuze uthole Smolensk emathuneni
Izindlela zamanje kanye ngempumelelo ekwelapheni ukungabi nenzalo
Dendrosicyos - incazelo, izinhlobo, izici ukunakekelwa futhi kulinywe